Dr.Farole oo Tacsi ka direy Su/ Onkod
2 Feb 2, 2013 - 2:57:14 AM
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr.Cabdiraxman Maxamed Farole ayaa ka tacsiyeeyey Geerida Alaha u naxariistee Suldaan Muse Faarax 'Muse Onkod'' oo maanta 02 February,2013 koox hubeysani ku dishey magaalada Bossaso.
Dr.Farole oo Warbaahinta gudaha la hadlay ayaa Eheladi ,Qaraabadii iyo Umadda Reer Puntland uu ka dhintey Suldaan tacsi uga direy isagoona Alle uga baryey in Samir iyo Iimaan ka siiyo dadkii uu ka tagay Janadii Fardowsana ka waraabiyo.
''Waxa diley Nabadiidka Puntland'' Ayuu yiri Madaxweynuhu oo u direy fariin qoyskii uu ka dhashay ee Muuse Saleebaan ''Ugaar Saleebaan'' oo ahayd in ay naftooda xakameeyaan.
Ciidamada Amaanka Puntland ayuu sheegey madaxweynuhu inay hayaan raad ku saabsan cida ka danbeysey dilka Marxuumka,dhowaana laamaha cadaalada la horkeeni doono.
Garowe Online waxay dib idinka soo socod siin doontaa Marxuumka taariikhda iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dilkiisa.
Halkan ka dhageyso Codka Madaxweynaha Puntland oo tacsida diraya